Raiisul Wasaare kuxigeenka Dalka oo shirar muhiim ah uga qeyb galay dalka Belgium SAWIRRO – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raiisul Wasaare kuxigeenka Dalka oo shirar muhiim ah uga qeyb galay dalka Belgium SAWIRRO
18th June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Muqdishu, 15-17 June, 2016: Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Jamhuriyadda Federaalka Soomaalia Mudane Maxamed Cumar Carteh iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa safar shaqo ku tagay magaalda Brussels ee dalka Belgium, xarunna u ah Midowga Yurub. Shirkaas uu la qaatay madaxda kala duwan ee Midowga Yurub, wuxu kala hadlay arrimo baadan oo ku saabsan horumarka iyo samafalka wadamada iyo Midowga Yurub ay siiyaan Soomaaliya. Waxaa kale oo barbar socday kulamo kale oo Midoga Yurub soo qaban-qaabiyeen oo lagaga hadlayey sidii loo hirgelin lahaa Agendaha 2030 ee Horrumarka Waara.
Ra’iisual Wasaaraha ayaa waxuu ka qayb qaatay xaflad furitaanka isaga iyo hoogaamiyaal kala duwan oo kamid yihiin, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Boqorada Belgium, Madaxwaynayaasha Mauritius, Burkino-Faso, Kenya, Ra’isul Wasaaraha Itoobiya iyo madax kale oo badan. Shirkaas oo lagu falanqaynayey doorka ay Midowga Yurub ka qaadan karto dib u dhiska wadamada ay saameeyeen, dhibaatooyinka la xiidhiidha is bedelka cimilada adduunka iyo dagaalada sokeeye iyo sida ay bulshadu ugu dhabar adaygi layhayd aafooyinka.
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka, Mudane Maxamaed Cumar Carteh ayaa waxa uu kulumo gaar gaar ah oo kala duwan la’yeeshey Gudiyadda Midowga Yurub. Sida, gudiga Iskaashiga Caalamiga, Arimaha Dibedda, ganacsiga, iyo Aminiga.
Ra’ iisul Wasaare Ku-xigeenka oo warbixin ka bixiyay horumarka iyo guulaha laga gaaray xaga amniga, dhaqaalaha iyo siyaadda dalka. Mudane Mahamed Cumar Carteh ayaa hoos ka xariiaqay in Somalia aanay kaga bixin Karin marxaladdan macaawino keliya ee loo baahan yahay in dawladaha iyo sharikadaha Yurub ay Somalia maalgashadaan.
Mudane, Maxamed Cumar Carteh, waxuu sidaa si la’eg u xaqiijiyay in dowladda ka go’an tahay in sanadkan 2016ka ay waddanka doorasho ka dhacayso, lana fulinayo balan qaadkii ahaa in dowladdu xukunka ku wareejiso dawlad la soo doortay.
Ra’iisul Wasaara ku xigeenku wuxuu ku adkeeyay madaxda sare ee midowga Urub in ay Somalia si buuxda uga taageeraan sugida amniga, ilaalinta khayraadka iyo amiga badaha iyo xeebaha Soomaaliyeed.
Waxay Midowga Yurub u xaqiijiyeen Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka in ay ku faraxsan yihiin soona dhawayeen horumarka dowladdu ay ka sameysay dhinacyo badan sida kobcinta dhaqaalaha, amniga, iyo meel-marinta siyaasadda amniga badaha iyo xeebaha Soomaaliyeed.
Alaa Mahad Leh!!!
We must Choose to not Live in Terror